ယနေ့ အင်တာနက် ခေတ်ကြီးတွင် ချက်ခြင်းသည် အတော့်ကို ရေပန်းစားလေသည်။ ချက်သည်ဟု ဆိုရာတွင် ချက်ပြုတ်ခြင်း cooking နှင့် မမှားလိုက်ကြပါနှင့်ဦး။ သိုးဆောင်းစကားဖြင့်ဆိုရသော် chat ၊ မြန်မာစကားကို အသံဖလှယ်၍ ချက် ဟုသုံးနှုံးထားသော မွေးစားစကားလုံး ဖြစ်ပေသည်။ ယေဘုယျ အဓိပ္ပါယ်မှာ စကားစမည်ပြောဆိုခြင်း ဟုဘာသာပြန်နိုင်ပေမည်။ ပို၍တိတိကျကျ ဆိုရသော် အင်တာနက်လှိုင်းမှ တဆင့် ကွန်ပြူတာတစ်လုံးနှင့် တစ်လုံးအကြား တမဟုတ်ချင်း စာရေးဆက်သွယ် စကားပြောကြခြင်းပင်။ အီးမေးလ် ကဲ့သို့ အချိန်စောင့်စရာမလိုပဲ ချက်ချင်း တုန့်ပြန် ရေးသားနိုင်ခြင်းသည် ကား ချက်ြခင်း၏ အားသာချက်ပါပေ။ အချို့က ရပ်ဝေး ရောက်နေသော ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေများနှင့် ချက်ကြသည်။ အချို့က မည်သူမည်ဝါရယ်မဟုတ် မိတ်ဆွေရှာ သူငယ်ချင်းရှာ ချင်သဖြင့် ချက်ကြသည်။ အချို့က ကြူကြူ လုပ်ချင်သဖြင့်ချက်ကြသည်။ ချက်သူကို ချက်တာ (chatter) ဟုခေါ်သည်။ ချက်သူများ စုဝေးရာ အရပ်ကို ချက်ရွမ်း (chat room) ဟုခေါ်သည်။
မယုံမရှိနှင့်မိတ်ဆွေ။ ချက်ရွမ်းထဲတွင် သင်သည် ဘာမဆို ဖြစ်နိုင်သည်။ အမေရိကားရောက်နေသူ ဆယ့်ခြောက်နှစ် တစ်ရက်လျော့ ဆတ်ကော့လတ်ကော့ ကောင်မလေး ဖြစ်နိုင်သည်။ ပျိုတိုင်းကြိုက် နှင်းဆီခိုင်ဆိုလား ရုရှားပညာတော်သင် သွားနေသူ စစ်ဗိုလ်ကလေး ဖြစ်နိုင်သည်။ စင်္ကာပူ ပိုလီကျောင်းတက်နေသူ စတိုင်ထွားထွား သူဌေးသားကလေး ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့ကလို မည်သူများ မည်သို့ပင် ချက်ကြစေကာမူ ကျွန်ုပ်အဖို့ကား ချက်ခြင်း၏ နောက်ကွယ်မှ မှတ်သားဖွယ်များကိုသာ ဤသို့ လေ့လာမိခဲ့ပါသတည်း။
မည်သူက စထွင်ခဲ့သည်တော့ မသိပါ။ အချို့အချို့သော ဥာဏ်ကြီးရှင်တို့မှာ ချက်ရွမ်းတွင် မြန်မာစာကိုလည်း မရိုက်တတ် အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်း ရေရေလည်လည် မတတ်သည်လား ပျင်းသည်လား မပြောနိုင်။ အင်္ဂလိပ် စာလုံးဖြင့် မြန်မာ အသံထွက်တို့ကို အောက်ပါအတိုင်း ရေးလေ့ရှိကြရာ မြင်းဂလိရှ် (Myenglish) သို့မဟုတ် ဘားဂလိရှ် (Burglish) ဟု ခေါ်တွင်လာသော ဘာသာစကား တစ်မျိုး ပေါ်ထွက်လာလေ၏။
“hey.. kaung lay, nay kaung lar?”
“kaung ba byar, ma tway tar taung kyar bee pot”
“hote te lay. Ah lote shote nay de.”
ကြာလျှင် မလေး အင်ဒို ဘဟာစာ ကဲ့သို့ မြန်မာ ဘဟာစာ စကားဟု ပေါ်လာနိုင်စရာ အကြောင်းရှိ၏။ မြန်မာဘာသာ အတတ်ဆန်း အဲလေ.. တစ်ခေတ်ဆန်းချိန်တည်း။
ထို့အပြင် ချက်ြခင်းနှင့် ဆက်နွယ်သော အောက်ပါဝေါဟာရများလည်း ရေပန်းစားလာစရာ အကြောင်းရှိသည် ဟုတွေးမိပါသည်။
ချက်ကြသည် ဆိုရာဝယ် ကောင်လေး ကောင်မလေးများသာ မဟုတ်၊ လုကြီးလူငယ် ၊ မကြီးမငယ်များပါ မကျန် အင်တာနက်ရှိက ကွန်ပြူတာရှိက ချက်နိုင်လေသည်။ ကိုယ်ပိုင်နာမည် အစစ်နဲ့ ချက်စရာမှမလိုပဲ။ ဘယ်သူသိတာ လိုက်လို့နော။ ဤသို့ဆိုလျှင် လူရှေ့သူရှေ့တွင် ဟန်ကလေးနှင့်နေကာ ကွယ်ရာကျမှ သူများမသိအောင် တိတ်တိတ်ပုန်း ချက်သော သူများကို - ချက်ပုန်း- သို့မဟုတ် - ချက်ပုန်းခုတ်သူ - ချက်ပုန်းသီး- ဟုခေါ်လျှင် သင့်ပေမည်။ ….. အဟိ… တို့ရုံးက အန်ကယ်ကြီးက လက်စသတ်တော့ ချက်ပုန်းကြီးပဲ။ ဟိုနေ့က ကွန်ပြူတာ လော့ဂ်အောက်လုပ်မသွားလို့ သွားပိတ်ပေးတော့မှ သူ ကြူနေတဲ့ ကောင်မလေးဆီက မက်ဆေ့ခ်ျတွေ ၀င်လာတယ်ဆရာ… စသည်ဖြင့် စာရေးမကလေးများက သူတို့ဆရာကို စကားတင်းဆိုရာတွင် ဤဝေါဟာရကို တော်သလို သုံးနိုင်သည်။
တညလုံး အပီအပြင် ချက်ထား၍ နောက်တနေ့တွင် ကျောင်း၌ ရုံး၌ အိပ်ငိုက်ကာ ဒေါင်းနေခြင်းမျိုးကို - ချက်နာကျခြင်း - ဟုခေါ်နိုင်မည်။ ဤသို့ ချက်နာကျလျှင် နံနက်စောစော အင်တာနက် ၀င်ကာ မိမိ အလွမ်းသင့်သူနှင့် တစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းလောက် ချက်လိုက်မှ အနည်းငယ် လန်းလန်းဆန်းဆန်း ရှိသွားနိုင်လျှင် - ချက်မီအပ်- လုပ်ခြင်းဟုခေါ်နိုင်မည်လား မသိပါ။
မိမိ အမြဲ အစဉ်တစိုက် ချက်လေ့ရှိသော ချက်ဖော်ချက်ဖက်ကို - အချက်တော်- ဟုခေါ်နိုင်သည်။ ချက်ရာတွင် ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်း သူများမကောင်းကြောင်း ကိုယ်ကောင်းကြောင်း ပြောကြခြင်းကို - ချက်တင်းနှော - ကြသည်ဟု ဆိုလျှင် ဟုတ်သလိုလိုရှိသည်။ သို့သော် ဤဝေါဟာရများ ကို နားလေးသော အမေရှေ့တွင် - ညက အချက်တော်နဲ့ တညလုံး ချက်တင်းနှောထားတာ ဒီမနက်တော့ ချက်နာကျနေပြီ - ဟုပြောမိလျှင် နားကြားလွဲပါက ပေါင်တွင်းကြော ကောင်းကောင်း လိမ်ဆွဲခံရကိန်းရှိသည်။
တန်ဆေးလွန်ဘေးဟု ဆိုသည်မဟုတ်ပါလော။ ချက်စ ရှိလျှင် ဆက်ချက်ချင်သည်။ အချက်ကြီးသူတို့သည် စာဖတ်ချိန် အလုပ်လုပ်ချိန် များမှ အချိန်ကိုပင် ဖဲ့ယူ၍ ချက်တတ်ကြသည်။ အွန်လိုင်းဝင်တိုင်း ချက်ရွမ်းသွားကာ ချက်သူကို ရှာဖွေတတ်ကြသည်။ ဤအခြေအနေသို့ ဆိုက်ရောက်နေလျှင် -ချက်စွဲခြင်း - ဟုခေါ်နိုင်သည်။ အချိန်တန်လို့မှ မချက်ရလျှင် မနေနိုင် - ချက်ပိုးထိုး - လာတတ်သည်။ အချက်ရောဂါ အချက်နာကား ကုစရာနတ္ထိ ဆေးမရှိပြီလော။
ထို့အပြင် မြန်မာ့ အနုပညာ နယ်ပယ်၌လည်း - ချက်လူမိုက်၊ ချက်ပင် ချက်မိုး ချက်လိုက်ပါတဲ့မေ၊ ချက်တာလောကများ၏ ဟိုမှာဘက်၊ ချက်လောက၏ စိန်ခေါ်သံ၊ မရှိမဖြစ်ချက်၊ ချက်တဗလ၊ ချက်နည်းကြူနည်း- စသည့် ခေါင်းစဉ်များ ဖြင့် ချက်ခြင်းနှင့် ပါတ်သက်သည့် သီချင်း၊ ၀တ္ထု ၊ တက်ကျမ်း များလည်း အများအပြား ပေါ်ထွက်လာစရာ အကြောင်း ရှိလေသည်။
ဤသို့လျှင် ရောက်တတ်ရာရာ တွေးတောမိပါသတည်း။
၃၀၊ ၄၊ ၂၀၀ရ
Posted by pandora at 9:05 PM
မပန်ရေ... ဒီပို့စ်လေး ရေလည်မိုက်တယ် ။ ဟာသလေးနဲ့ ရသမြောက်ပါပေတယ် ။
May I add something in this post.
As of our Myanmar Culture and Tradition (might be most Asian), we all have few things to get new friends and society.
Youngster sit at the Chat Room is notaproblem of Ei-Zi-Ga-Li or non-sense thing, they just finding and setting up their social networks.
There are more female chatters than male ones in every Myanmar Cyber cafe, asaresult of more restrictions of parents on Myanmar Girls.
This showaneed of Our Society whether we got internet or not, that's we called "Want to meet Alien". When we connected, people
started to fulfill their natural needs.
In addition, Internet hasapower that we could not know who the others are, let's call "Making Anonymous to everyone", youngster are very free to use chat room.
Thanks "Myanmar Life" for your comments. My post does not mean any offense to the chatters. Don't take it seriously. I also chat with my on-line friends over G-talk or Yahoo messanger. Just don't overdo it and everything will be fine.
ချက်ပင် ချက်မျိုး ချက်သက်ပျိုးလို့ ချက်မိုးကြီး ရွာချည်လေပြီတကား.. ခွိခွိခွိ ရီရတယ် ဗြဲ
‘ချက်ခြင်း၏အနုပညာ’ ဆိုတာထက် ‘ချက်ခြင်းအနုပညာ’ ဆို လုံလောက်တယ်။ ပိုပြီးတော့လည်း လှတယ်လို့ထင်မိတယ်။
ပြီးတော့ ရရစ်အသေး ကိုမှားရေးနေတော့ ဖတ်ရတာတမျိုးပဲ။ ‘ချက်ခြင်း’ လို့ရိုက်ရမှာကို ‘ချက်ခြင်း’ ဖြစ်နေလို့ ပြောတာပါ။
ဘာပဲပြောပြော ဘားကလိရ်ှထက်တော့ အများကြီးသာပါတယ်။
အခုလိုထောက်ပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ.. ရရစ်တွေအမျိုးမျိုးကို ရိုက်တာ မကျွမ်းကျင်ပါ။ ဘယ်မှာရှာရမှန်းကို မသိတာ.။ အခုတော့ လက်ကွက်ထဲမှာ ရှာတွေ့သွားပါပြီ။ တွေ့သလောက် ပြင်လိုက်ပါပြီ။ နောက်ကိုလည်း ထောက်ပြပေးစေလိုပါတယ်။
ချက်ခြင်း အနုပညာ ဆိုတဲ့ ပို့စ်ကို ဖတ်ရတာ ဆရာကြပ်ကလေးရဲ့ စာကို သောင်းပြောင်းမှာ ဖတ်နေရလား မှတ်ရတယ်။ ဒီလိုတွေလဲ ရေးတတ်တာပဲကိုး။
`ချစ်´ ပြီး `ချက်´ တာ အရင်တုန်းက (ချစ်ချက်-ချစ်ချက် ချစ်ပြီးတော့ဟင်းချက်)
`ချက်´ ပြီး `ချစ်´ တာ ခုခေတ် (ချက်ချစ်-ချက်ချစ် ချက်ချင်းချစ်ပြီး ချက်ချင်းပစ်)
အဲ့ဒီမှာ တွေ့လာလို့ လာအကြောင်းကြားတာပါ။ forward mail ကနေရလို့ တင်ထားပုံပါပဲ။ အဲ့ဒီလို blog တကာက ကောင်းနိုးရာရာတွေကို ကူးပြီး မေးလ်တွေဖြန့်တဲ့သူတွေကလည်း မူရင်းရေးသူကို ထည့်မပေးတာ အတော်ဆိုးပါတယ်။ အလွန်ဆုံးမှ စာလုံး ၅လုံး ၆ လုံးလောက်ဖြည့်ရတာကို အလေးမထားချင်ကြဘူး။ ပြန်တင်တဲ့သူတွေကလည်း ကိုယ့်မူမိုင်မဟုတ်ရင် ဘယ်ကရကြောင်းလေးတော့ မှတ်ချက်ထည့်ရေးသင့်ပါတယ်။ ခပ်တည်တည်မလုပ်ကောင်းဘူးပေါ့။
အကြောင်းကြားရုံပါပဲခင်ဗျာ။ အတော်များများလည်း ကြုံဖူးနေကြတော့ ထူးပြီးခံစားရမှာ မဟုတ်ဘူး။ သိအောင်တော့ သွားပြောပြလိုက်ပါအုံးခဗျာ။
link မပေါ်လို့ ပြန်လာပေးတယ်ခဗျ။